Lavo miaraka amin'ilay hetsika ve ny EarPods anao? Manome anao vahaolana telo izahay | Avy amin'ny mac aho
Lavo miaraka amin'ilay hetsika ve ny EarPods anao? Vahaolana telo no omenay anao
Laura varo | | Apple products
Amin'ny maha mpankafy mozika tsara ahy dia efa nikaroka momba izany aho kalitaon'ny feo ny - avy eo vaovao - Earpods izay niova fo famaritana ny bas. Ny fahafahan'ny iPhone mandefa a feo avo lenta Tamin'ny alàlan'ny fivoahana minijack tsotra dia hitako fa tena mendri-piderana izy io, fa ny fanadihadiana sy ny hevitra nisy vakio ny momba ny EarPods somary nanitatra ahy angamba izy ireo. Mandra-pahatongako manana fotoana hanandramana azy ireo.
Yo, mpiaro mafy vato Feon-kira ankehitriny sy boribory misy tsipika basika tsara, tiako hapetraka izany fipoahana bas izay novakiako be dia be. Nivoaka teny amin'ny arabe aho Niditra amina EarPods vaovao aho, Notadiaviko ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny elektronika iTunes izay azoko henoina hatramin'ny farany, naveriko ny feo, ary napetrako tao anaty feo ny saiko rehetra: mahatalanjona fotsiny.
Earhooks ho an'ny AirPods ...
Saingy tsy ny zavatra rehetra ho tonga lafatra. Rehefa nandeha aho dia nifantoka tamin'ny fitsapana ny EQ ary nankafy ilay mahery setra halalin'ny bass ary ny tonga lafatra fifandanjana eo amin'ny midrange sy treble, Nojereko fa ny fiarovan-doha tsy nety tsara izy ireo ary lasa miaraka amin'ny fihetsiky ny tariby. Tena nampisahotaka izany hatrizay Tsy afaka nitoka-monina aho feno feo ivelany ary, mbola ratsy kokoa aza, raha tsy tsindriako izy ireo dia very ilay feo ary manjavozavo ny bas.
Ho an'ny fampandrosoana ny EarPods, nosedraina i Apple karazany mihoatra ny 100 modely amin'ny mihoatra ny 600 ny mpanandramana iharan'ny fanandramana ara-batana isan-karazany rehefa manao aroloha, mba hahafahan'ny injeniera a famolavolana mahomby ho an'ny ankamaroany. Na izany aza, ny olona tsirairay dia samy hafa ary, tsy mahagaga, ny sofiny koa.
Rehefa avy nanandrana ny kalitaon'ny EarPods na ny mpanara-maso aza Ao anaty sofina de Shure izay ampiasako amin'ny seho mivantana dia toa lalina ho ahy. Tapa-kevitra ny hitady vahaolana aho, nitety Internet mandra-pahitako lisitra lehibe iray mpampiasa manana olana mitovy amin'izany: ny EarPods dia tsy nifanaraka tsara tamin'ny sofin'ny maro tamin'izy ireo ary, noho izany, nianjera tamin'ny farany izy ireo. Ny fanaovana fikarohana bebe kokoa fotsiny dia azoko kojakoja telo fa amin'ny vidiny mora indrindra dia afaka hamaha ity olana ity.
1 Sprng: vahaolana mahomby hitazonana ny EarPods eo amin'ny toerany
2 Earhoox: safidy matotra sy voahitsy kokoa
3 Earbudy: fifamatorana ivelany ho an'ny EarPods
Sprng: vahaolana mahomby hitazonana ny EarPods eo amin'ny toerany
Toa ahy io fitaovana io ny tsotra indrindra ary, tsy nieritreritra indroa aho dia nandidy azy tao amin'ilay tranonkala ihany Lohataona. Tao anatin'ny herinandro nandefasana ny baiko dia efa ananako tao an-trano izany.
Izany dia lambam-pandriana malefaka sy malefaka amin'ny fonosana minimalista, kanto ary tena miasa. Ny fametrahana dia tena tsotra, mila fotsiny ianao mifanaraka ny fototry ny handset tsirairay ao amin'ny fantsona fingotra ary manitsy halava mahazo aina kokoa ho antsika izany.
Ny foil dia miafara amin'ny endrika clip izay miraikitra foana amin'ny cartilage. Tsy nahatsikaritra fahasahiranana aho ary, na dia tsy manamboatra tsara ny toerana aza izy, mijanona eo amin'ny toerany ny aroloha nefa tsy mivoaka akory, dia toy izany koa ilay asa.
Earhoox: safidy matotra sy voahitsy kokoa
ny Earhoox aseho ao amin'ny maodely roa samy hafa azo ampifanarahana amin'ny a fiarovan-doha marobe amin'ny loko isan-karazany hisafidianana. Ny marika dia miantoka fametahana henjana sy maharitra misy karazana hetsika, ary mora apetraka ihany koa ilay fitaovana: a saron-tady izay mametraka ny aroloha ary manamboatra azy amin'ny sofina amin'ny alàlan'ny fanitarana kely izay mijanona ao anaty ny cartilage.
Earbudy: fifamatorana ivelany ho an'ny EarPods
ny earbuddy asehoy ny endrika efa fantatray fiarovan-doha mihazakazaka sy fanatanjahan-tena hafa: a farango fingotra izay apetraka manodidina ny cartilage ivelany ary hitazona ny EarPods ao anaty sofina amin'ny toerana mety. Azo alaina ihany koa amin'ny loko isan-karazany ary miaraka a tarika azo ovaina hiantohana ny fampiononana faran'izay betsaka.
Ary ianao, manana olana amin'ny fametahana ny EarPods ve ianao? Raha fantatrao ny iray amin'ireo kojakoja ireo na nanana ny fanandramana nanandramana azy ireo dia avelao aminay ireo zavatra niainanao tamin'ireo fanehoan-kevitra.
Raha te hahita safidy misimisy kokoa ianao hanalavirana ny AirPods anao, amin'ity rohy ity dia ho hitanao ny vahaolana rehetra izay azonao amin'ny vola kely dia kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Lavo miaraka amin'ilay hetsika ve ny EarPods anao? Vahaolana telo no omenay anao
Lahatsoratra lehibe sy mahasoa.
Laura varo dia hoy izy:
Tsara, misaotra amin'ny fidirana!
Valiny tamin'i Laura Varo
Artistier dia hoy izy:
Efa nanandrana nametraka ny ankavanana tamin'ny ankavia ve ianao? Toa hadalana ary ny zavatra ratsy dia ny tsy fihainoanao ilay hira araka ny namoronan'ny mpamoron-kira azy, izany hoe nivadika ilay panoramic fa azo iainana tanteraka. Amin'izany fomba izany dia somary mirona izy ireo fa io no hany fomba nahaizako nitazona azy ireo tsy misy kojakoja, mifanaraka tsara.
Izao tontolo izao ny sofina tsirairay ... 🙂
Mamaly an'i Artsier
Tranonkala manokana iray hafa ho an'ny vidin'ny Mac faharoa